Raysalwasaaraha Itoobiya oo Amaray Siideynta Maxaabiis Badan. |
Raysalwasaaraha Itoobiya oo Amaray Siideynta Maxaabiis Badan.
Dowlada Itoobiya ayaa sheegtay inay xabsiga kasii deynayso dad gaaraya 300 qof oo intooda badan u xirnaayeen eedeyn ah falal argagaxiso.
Addisababa(GNN):-Go’ aankan ayaa qeyb ka ah dadaalka uu Raysalwasaaraha cusub Abiy Axmed ku doonayo inuu ku xaliyo xiisadaha siyaasadeed iyo amni ee dalkaasi ka jiray bilihii lasoo dhaafay.
Xukuumada cusub ayaa bishan qaaday xukunkii xaalada deg degta ah ee dalkaasi lagu soo rogay sanadkii tagay, iyadoo tan iyo bishii April xabsiyada laga siidaayey in ka badan 1000 maxaabiis ah.
Maxaabiista cusub ee laga siidaayey ama laga siideyn doono xabsiga ayaa waxaa kamid ah kuwa ajaanib ah sida sadex qof oo u dhashay dalka Kenya, siideynta maxaabiistaasi oo qeyb ka ahayd heshiiskii dhexmaray Kenya iyo Itoobiya dhawaan.
Maamulada kala duwan ee Federaalka Itoobiya oo ay ku jiraan kuwa Oromada iyo Soomaalida ayaa kamid ah goobaha la sheegay in laga siideyn doono maxaabiista xabsiyada lagu hayey oo u badnaa kuwo lagu heysto arrimo siyaasadeed ama falal lagu eedeeyey oo argagaxin ah.
Madaxweynaha Ismaamulka Soomaalida Cabdi Maxamuud Cumar oo Ciidii shalay shacabka la hadlay ayaa sheegay in maamulkiisa uu wado dadaal badan oo wax looga bedalayo xaalada xabsiyada dalkaasi iyo waliba maxaabiista oo uu sheegay in badan in cafis loo fidiyey. Marka laga reebo maxaabiista loo heysto dilka iyo Kufsiga.
Isbedalka ka jira dalka Itoobiya ee Abiy Axmed wado ayaa sidoo kale saameyn ku yeelanaya ismaamulada dalkaasi oo ay xukuumada ku cadaadineyso inay wax ka bedalaan qaabka ay shacabka ulla dhaqmaan si xal loogu helo kacdoonka shacab ee ka jira gobalo badan oo dalkaasi kamid ah.